Yini ama-asteroid futhi ahluke kanjani kuma-meteorite | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Umkhathi kuyinto emnandi ukwazi. Nsuku zonke sifunda kabanzi ngayo futhi sihlaziya izimfihlakalo ezithinta ukusebenza kwakho konke. Impela uke wabona noma wakhuluma ngakho ama-asteroid. Kungenzeka futhi ukuthi ubadidanise nama-meteorite ngoba awazi kahle imiqondo. Ama-Asteroid awalutho ngaphandle kwezinto ezincane ezakhiwe ngamatshe, ikakhulukazi, nokuthi, njengawo wonke amaplanethi, azungeza ilanga.
Uma unemibuzo mayelana nokuthi ama-asteroid ayini nokuthi ahluke kanjani kuma-meteorite, lokhu okuthunyelwe kwakho. Sizokuchazela konke lokhu ngokuningiliziwe.
1 Yini i-asteroid futhi ineziphi izici
2 Izinhlobo ze-asteroids
3 Imiphi imininingwane ekhishiwe?
4 Umehluko nge-meteorites
Yini i-asteroid futhi ineziphi izici
Njengoba sishilo, i-asteroid akuyona into edlula into enamadwala ezungeza iLanga. Yize ubukhulu bayo bungafani nobomhlaba, ukuzungeza kwayo kuyafana. Kunama-asteroid amaningi azungeza ku- Uhlelo lomkhathi. Iningi labo lakha lokho esikwaziyo njengebhande le-asteroid. Lesi sifunda siphakathi kwemizila ye- Mars y I-Jupiter. Njengamaplanethi, i-orbit yawo iyindilinga.
Abatholakali kuleli bhande kuphela, kepha bangatholakala nasendleleni eya kwamanye amaplanethi. Lokhu kusho ukuthi le nto enamadwala inendlela efanayo ezungeze ilanga, kepha akukho okumele ukhathazeke ngakho. Ungase ucabange ukuthi uma i-asteroid isemzileni ofanayo noweplanethi yethu, isikhathi sizofika lapho ingahlangana khona futhi idale izinhlekelele. Lokhu akufani nalokhu. Akunasidingo sokukhathazeka njengoba zingashayisani.
Ijubane ama-asteroid asemzileni ofanayo nowe-orbit orbit ngokuvamile ahamba ngejubane elifanayo. Ngakho-ke, abasoze bahlangana. Ukuze lokhu kwenzeke, kungenzeka uMhlaba uhambe kancane, noma i-asteroid kuzodingeka inyuse ijubane layo. Lokhu akwenzeki emkhathini ngaphandle uma kukhona amandla angaphandle enza lokhu. Okwamanje, imithetho yokunyakaza ilawulwa yi-inertia.
Lawa ma-asteroid avela ekwakhekeni kweSolar System. Njengoba sibonile kwezinye izindatshana, iSolar System yakhiwa cishe eminyakeni eyizigidi eziyizinkulungwane ezingama-4.600 edlule. Lokhu kwenzeke ngesikhathi kudilika ifu elikhulu legesi nothuli. Njengoba lokhu kwenzekile, izinto eziningi zawela enkabeni yefu, zakha iLanga.
Zonke ezinye izinto zaba amaplanethi. Kodwa-ke, izinto ezisebhanti le-asteroid azibanga nethuba lokuba yiplanethi. Njengoba ama-asteroid akha ezindaweni nezimo ezahlukahlukene, awafani. Ngamunye wakheke ebangeni elihlukile elangeni. Lokhu kwenza izimo nokwakheka kuhluke futhi.
Sihlangabezana nezinto ezingezona eziyindilinga, kunalokho banezimilo ezijikijekile nezingajwayelekile. Lokhu kwenziwa ukushaywa okuqhubekayo nezinye izinto kuze kube yileso sikhathi.
Ezinye zingamakhulu amakhilomitha ububanzi futhi zinkulu. Mincane, njengetshe. Iningi lazo lenziwe ngezinhlobo ezahlukene zamatshe. Eziningi zazo zinenani elihle le-nickel ne-iron.
Imiphi imininingwane ekhishiwe?
Lezi zinto ezinamadwala zingasinikeza imininingwane ethile mayelana nolwazi lwendawo yonke. Njengoba zakha ngasikhathi sinye njengeSolar System, lawa madwala asemkhathini angasinikeza ulwazi ngomlando wamaplanethi neLanga. Ososayensi bangawahlola la ma-asteroid ukuthola ulwazi ngawo.
Kube nemishini eminingi yesikhala se-NASA lapho kubonwe khona ama-asteroid. Ekundizeni okwenziwe ngumkhumbi-mkhathi we-NEED Shoemaker obheke ku-Eros (igama elinikezwe i-asteroid) yehlela kuwo ukuze ithole imininingwane ethile ngokwakhiwa nokwakhiwa kwento enamadwala. Kube khona okunye ukuthunyelwa kwesikhala sokuhlola njenge-Dawn spacecraft ukuvakashela ibhande le-asteroid lapho i-Vesta yahlaziywa khona, i-asteroid enkulu njengeplanethi encane, kanye nomkhumbi-mkhathi we-OSIRIS-REX osebenzele ukuvakashela i-asteroid eseduze. Emhlabeni obizwa ngoBennu no ulethe isampula kwiplanethi yethu.
Njengoba sishilo ekuqaleni kwendatshana, impela wake waphutha i-meteorite njenge-asteroid. Futhi ukuthi ama-asteroid ahlukaniswa ngokwesimo akuso kuSolar System. Isibonelo, sesivele sishilo lezo ezisebhodini le-asteroid phakathi kweMars neJupiter. Kukhona ezinye ezibizwa ngama-NEAs ngoba zisondele eMhlabeni. Sithola namaTrojans, okuyilawo azungeze umzila weJupiter.
Ngakolunye uhlangothi, sinama-Centaurs. Lezi yilezo ezisengxenyeni engaphandle yeSolar System, eduzane ne- I-Oort Cloud. Ekugcineni, sisele nama-asteroid ahlanganisa umhlaba. Lokhu, "athunjwa" ngamandla adonsela phansi nomjikelezo womhlaba isikhathi eside. Bangaphinda bahambe futhi.
Kuze kube manje ngiyethemba konke kuhamba kahle. Manje yisikhathi sokwazi ukuthi yini i-meteorite. I-meteorite ayilutho ngaphandle nje kwe-asteroid efika eMhlabeni. Leli gama linikezwa ngoba, lapho lingena emkhathini, lishiya umkhondo wokukhanya obizwa ngokuthi yi-meteor. Lezi yizona eziyingozi kubantu. Kodwa-ke, umkhathi wethu uyasivikela kubo, ngoba lapho behlangana nawo, bagcina sebencibilika.
Ngokuya ngokwakhiwa kwabo, bangaba ngamatshe, insimbi noma bobabili. Umthelela we-meteorite nawo ungaba muhle, ngoba imininingwane eminingi ingatholwa ngakho. Kungenzeka ukuthi kungadala umonakalo uma mkhulu ngokwanele ukuthi umoya ungawonakalisi ngokuphelele lapho behlangana. Lokhu kungabikezelwa namuhla ngokwazi umkhondo wayo.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi ngama-asteroid nama-meteorite.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isayensi yezinkanyezi » Ama-Asteroids